Ezi ntụ ọka, ọkụkọ na biya
Ulo ulo Ntuziaka Ndị ọzọ Ihe ndị ahụ Nnụnụ Chicken
N'okpuru isiokwu "Ezi ntụ ọka anụ, ọkụkọ na biya" anyị ga-agwa gị ụdị efere ị nwere ike ime site na ọkụkọ. Ndị ọkachamara n'ubi nke ụwa dum emepụtawo, ọtụtụ efere si ọkụkọ. Iji mee ka ọkụkọ, ịkwesịrị inwe ọkụkọ ma ọ bụ ọkụkọ, otu biya, eyịm, obere osikapa, elu na ngwa nju. Ọ bụrụ na ọ dị ntakịrị oge, mgbe ahụ ọ dịghị eyịm na osikapa, naanị biya na ọkụkọ.
M dị mma, mgbe ahụ anyị na-egbutu ọkụkọ anyị. Na-aga n'ihu na oven, ka ọ nweta okpomọkụ. N'okpuru azọcha mmiri, gbakwunye ọkụkọ, ose ha, nnu. Anyị na-etinye eyịm eghe, ma ọ bụ wụsa obere mmanụ. Anyị na-agbanye biya dị ukwuu na ọ na-ekpuchi anụ ahụ. Ọ bụrụ na enwere oge, ịnwere ike ịsachasị mmiri shuga abụọ 2, ma tinye ha na mpempe akwụkwọ na ọkụkọ. Tinye 2 tablespoons nke mmanụ ihe oriri.
Beer ga-eji obi ọjọọ. Mgbe a na-aṅụ mmiri, a na-agbazi biya ma na-eberibe ya, na-ele ya anya n'ihu.
Ebido nke mbu. Emechila mpempe akwụkwọ a, ka ọkụkọ ahụ zuru oke na-aṅụbiga mmanya ókè, ọ ga-ejupụta ya na ísì ya. Ọnọdụ okpomọkụ dị na oven kwesịrị iru 150 ma ọ bụ 170 degrees. Na efere a ga-ewe minit 30 ịkwadebe. Mgbe a na-akwado ya, a ga-enwe oge iji jee ozi na tebụl ahụ.
Nkeji iri na ise ka e mesịrị, mechie mkpuchi na mkpuchi ma hapụ ya maka minit 15 ọzọ. Ọ na-apụta na ọkụkọ ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ, ihe siri ike, agụụ, ihe siri ike, na uto na-atọ ụtọ. A gaghị emechu ọkụkọ dị otú ahụ ihere ije ozi. Site na otu atụmatụ, ị nwere ike ịkwadebe ụkwụ, obi, ventricles, imeju, nku ọkụ.
Kedu ihe m nwere ike ijere nri dị otú ahụ? Ọ bụrụ na e tinyere osikapa na ọkụkọ, mgbe ahụ, anyị na-arụ ọrụ osikapa dị ka ejiji. Kama osikapa, i nwere ike iri akwụkwọ nri ma ọ bụ ọka ọ bụla. Oge ọ bụla uto nke efere ga-adị iche. Ikekwe ọkụkọ na poteto, buckwheat, celery, elu na ihe ndị ọzọ.
Na mgbakwunye na efere nri, salad nke herbs ọhụrụ, salting ma ọ bụ ihe si n'ụlọ canning, olive, salted mushrooms, dabere na ha ụtọ na mmasị. Ị ga-ekweta na efere nke ọkụkọ, na-edozi ahụ ma dị ụtọ, ọ ga-esi ike ịkwatu ọkụkọ na ihe.
Chicken na biya
Efrata: Were 1 ọkụkọ, ọkara nke liter nke biya biya, Mayonezi, ihe oriri na-esi na mmiri oyi (akwụkwọ ụtọ, tomato, zucini, carrots, eyịm). Na-esote, were ngwakọta nke seasonings, nnu, ite lita atọ na otu iko mmiri ọkụ.
Nkwadebe. Anyị na-ekekọta ọkụkọ n'ime iberibe na marinate na Mayonezi na oge. Hapụ ya maka minit 30 ma ọ bụ 60. Igwe ga-ekpo ọkụ site na 180 ruo 200 degrees. N'ime ite ahụ, anyị na-awụpụ otu iko mmiri ọkụ ma tinye ya n'ite mmiri na oven maka 5 ma ọ bụ 7 nkeji, iji kpoo ụlọ akụ.
Anyị na-ewepụta ite ahụ na oven, anyị ga-etinyekwa ọkụkọ n'ime ite ahụ. Anyị na-amalite ịtọgbọ ala, akpa nke ọkụkọ, wee tinye akwụkwọ nri akwụkwọ nri, mgbe ahụ, obere ọkụkọ na akwụkwọ nri. Mgbe ahụ, anyị na-agbanye biya n'ime ite ahụ. Tinye ike nke ọkụkọ na oven maka nkeji iri abụọ, na okpomọkụ nke 180 ma ọ bụ 200 degrees Celsius. Mee ka okpomọkụ dị elu na 230 degrees Celsius, anyị ga-agbakwa oge ọzọ ọkara. Anyị ga-eje ozi na akwụkwọ nri na-esi na ya.
Efrata: ọkụkọ, iko biya, 2 apụl, 1 tablespoon ntụ ọka, 1 tablespoon mmanụ nri, 1 tablespoon nke tomato mado, 1 cup soy sauce, pepper ground pepper, salt sea.
Akpa, anyị na-akwadebe ihendori, n'ihi na nke a anyị na-agwakọta ntụ ọka, soy sauce, bọta. Ihe niile dị mma.
Anyị ga-asa ọkụkọ ahụ, kpaa nku na ọkụ ma kpoo ya n'ime na n'èzí na nnu nnu. A pụrụ ịme nsị site na intramuscular na subcutaneous ogwu. Nke a ga - eme ka ọkụkọ sie ike, ọ ga - aba ụba n'ihu anyị. Ndụmọdụ - ịkwesịrị ịsacha ahụ agịga ugboro ugboro, ebe ọ na-esi na ntụ ọka. Mgbe ahụ, anyị na-etinye ọkụkọ na ngwa nju maka otu awa. A na-awụ mmanya na-agba n'ime ọkụ ọkụ. Gburugburu gbasapụ apụl ndị ahụ gburugburu, gbanye ha pasta tomato ma tinye ọkụkọ na ha. Tinye ụdị na oven maka awa.
Ezi ọkụkọ na biya
Efrata: ọkụkọ, ọkara nke liter nke biya biya, nnu, ngwakọta nke oge.
Nkwadebe. Chicken kwesịrị ekwesị, anyị ga-asa ya, bee ya n'ime iberibe, anyị nwere ike, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, wepụ akpụkpọ ahụ. Achịcha nnu ma fesaa ya na seasonings. Ka anyị hapụ maka minit 30 ma ọ bụ 40 maka ịkwọ ụgbọ mmiri. N'oge a, anyị ga-agbanye oven, ruo minit 30, ka ọ kpoo ọkụ.
Anyị na-etinye ọkụkọ na efere mmiri, iberibe ahụ aghaghị ịgha ụgha, n'enweghị ihe ọ bụla, ọdịdị ahụ kwesịrị ịdị nha. Ka anyị jupụta biya, ka biya wee kpuchie ya. Na-etinye n'ime oven ọkụ. Nri na Celsius ogo 180, ihe dị ka 40 ma ọ bụ 50 nkeji. N'oge a, a ghaghị ịmecha ihe nchịkọta nke mmiri na ihe ọṅụṅụ a na-etinye. Tupu enwee ike ịṅụ mmanya ahụ, mmiri ọkụ ahụ ga-enweta ọmarịcha mma, naanị na kichin a ga-anọgide na-esi ísì ụtọ.
Ngwakọta nke ihe eji eme ihe nwere ike ịcha ọbara ọbara (paprika, coriander) ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ (celery, pasili). Ị nwere ike iji setịpụrụ njikere.
Anyị maara ihe oriri ntụ ọka nke ọkụkọ na biya, anyị nwere olileanya na ị nwere mmasị na ha. Ihe nchoputa ihe ndi ozo nke oma!
Akwukwo ọkụkọ na tarragon
Chicken fillet na ude uto na dil
Chicken ara na apple-ude ihendori
Fillet na chicken na zucchini na ose dị ụtọ
Akpụkpọ anụ na-agagharị na sage na cheese
Isi dị mma
Mgwakota agwa: yist, bisikiiki, aja ...
Achicha na wayo
Salad sitere na akwukwo maka oyi: akwukwo nri di nma
Ntughari nke nwatakiri a: ihe omumu maka ogwu
Karịa chocolate bara uru
Pampushki na garlic
Okroshka na mmiri ịnweta mmiri
Akwa nri apụl: uzommeputa
Olee otú agba aja si agbanwe àgwà
Italian na-atụgharị na chiiz na tomato
Jam si gooseberries (Kiev)
Kedu esi ewepụ ihe isi ojii na ihu ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè?
Esi họrọ nche anwụ
Ịhụ okpomọkụ nke ahụ nwatakịrị
Àgwà na-edozi ahụ: wepụ ihe na-emerụ ahụ